नयाँ स्मार्टफोन किन्दै हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी प्रमुख ७ विषयमा ध्यान दिनुस्, कहिले गुनासो हुँदैन् - Technology Khabar
» नयाँ स्मार्टफोन किन्दै हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी प्रमुख ७ विषयमा ध्यान दिनुस्, कहिले गुनासो हुँदैन्
मानिसहरु यस उत्सवको समयमा नयाँ मोबाइल फोन खरिद गरिरहेका छन् । बजारमा यस उत्सावको अवसरमा विभिन्न मोबाइल ब्राण्डले छुट र अफरहरु प्रदान गरिरहेका छन् ।
त्यसैले तपाईँपनि बजारमा आफूलाई मनपर्ने कम्पनी र ब्राण्डका विभिन्न किसिमका फोनहरु खरिद गर्न तयारी गरिरहनुभएको होला ।
यस्तो बेलामा तपाईँले नयाँ स्मार्टफोन किन्नुभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु यस्ता छन् ।
डिस्प्ले साइज र क्वालिटी चेक गर्नुहोस्ः आफूलाई उपयुक्त लाग्ने स्किन साइज रोज्नुहोस् । डिस्प्ले क्वालिटी रेजोल्युशनसँग निर्भर हुन्छ। जति धेरै रेजोल्युशन हुन्छ, त्यति नै डिस्प्ले क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ।
अपरेटिङ सिस्टमः बजारमा एन्ड्रोइड र आईओएस अपरेटिङ सिस्टम भएका मोबाइल छन् । आईओएस अपरेटिङ सिस्टम एप्पलका डिभाइसमा मात्र उपलब्ध छन भने एन्ड्रोइडका फोनहरु सस्तादेखि महंगासम्म छन् । त्यसैले आफूलाई मनपर्ने र उपयुक्त अपरेटिङ सिस्टमको नयाँ भर्सन सहितको स्मार्टफोन किन्नु राम्रो हुन्छ।
प्रोसेसर र र्यामः प्रोसेसर जति पावरफुल भयो स्मार्टफोन्को परफरमेन्स द्रुत गतिमा चल्छ । र्याम भनेको सिस्टम मेमोरी हो जसले धेरै एप्लिकेशनका लागि स्पेस दिन्छ भने ह्याङ्ग हुने समस्या हुँदैन।
मेमोरीः अहिलेका प्रायः स्मार्टफोनमा कम्तिमा १६ जीबी या ३२ जीबीको इन्टरनल मेमोरी रहेको हुन्छ । धेरै कुरा फोनमा अटाउनका लागि इन्टरनल मेमोरी अधिक हुनु राम्रो मानिन्छ भने आवश्यकताअनुसार एक्सर्टनल मेमोरी राख्न मिल्ने मोबाइल छान्नुपर्छ।
क्यामराः फोटोको गुणस्तर आउनुमा क्यामराको मेगापिक्सेल मात्रै प्रमुख विषय होइन । यसमा कस्तो किसिमको लेन्सको प्रयोग भएको छ, कत्रो एपार्चर र कत्रो माइक्रोपिक्सेल छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। पछिल्लो समयमा १०८ मेगापिक्सेलसम्म क्यामराहरु भएका स्मार्टफोन उपलब्ध छन् ।
कनेक्टिभिटीः तपाईँले किन्न लागेको फोनमा कुन कनेक्सन चल्छ भनेर जान्नु पर्दछ । सिम जिएसएम होस् वा सिडिएमए, थ्रीजी सर्पोट गर्छ वा फोरजी सपोर्ट गर्छ भन्ने बारेमा ध्यान दिनु जरुरी छ। अहिले अधिकांशमा फोरजी सिम सपोर्ट हुन्छ।
ब्याट्रीः स्मार्टफोनमा साधारण फोनको तुलनामा धेरै ब्याट्री चाहिन्छ। हाल बजारमा ३२०० एमएएच भन्दा धेरै पावरको ब्याट्री भएका फोनहरु उपलब्ध छन् । त्यसैले तपाईँ कतिसमयसम्म आफ्नो फोन चलाउनुहुन्छ भन्ने आधारमा नयाँ स्मार्टफोन किन्दा ठिक हुन्छ।
नोकियाको एन्ड्रोयडमा आधारित स्मार्टफोन आउँदै, २२ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा